Mgbasa ozi vidio vidio gbasara akụkọ na-enweghị ọrịre | Martech Zone
Google naanị weputara ihe ohuru ohuru nke ahụ dị ezigbo mma ma onye ọ bụla na-achọ ịgbasawanye vidiyo ya na ngwaọrụ mkpanaka. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ụdị mgbasa ozi ihu gị nke ụnyaahụ adịghị arụ ọrụ na ngwaọrụ mkpanaka anyị.
Na-arụ ọrụ na Mountain igirigi, BBDO mepụtara vidiyo dị iche iche atọ. Nke mbụ bụ itinye mgbasa ozi telivishọn na ngwaọrụ mkpanaka. Nke abụọ na-atụba ntinye mgbasa ozi ozugbo maka ndị na-ekiri ekwentị ga-adaba. Vidio nke atọ anaghị agbanye ngwaahịa ahụ, mana akụkọ ahụ, na-ebute 26% nke ndị na-ekiri ekwentị na-ekiri vidiyo na ihe karịrị ọkara n'ime ha na-echeta ika ahụ.
Ọ bụrụ na nke a adịghị ka ihe dị ịrịba ama… buru n'uche na nnwale nke atọ bụ 30 sekọnd ogologo karịa abụọ ndị ọzọ!
Ohere ato achoputara ya na nnwale
Ihe a na-atụghị anya ya nwere ike ịdị ike. Ndị mmadụ ga-anọnyere gị.
Wepụta oge maka akụkọ gị. Etinyekwala ọnụ na akara gị tupu ha awụfee.
Ọ dịghị mkpa ka ọ dị ka mgbasa ozi iji bugharịa akara gị.
“The Original” jere ozi dị ka njikwa na nnwale Google. Ọ bụ ebe 30 nke sekọndrị nke ụmụ nwoke atọ jidere Mountain Dew Kickstart, malite ịgba egwu, na ihe niile dị n'okpuru ala-site na oche dị oke oke na nkịta-esonye. Mgbe ahụ ụmụ okorobịa na-apụ maka ihe ọ bụla na-esote.
Nke a 31-nke abụọ mobile ad recut na-amalite site na nnukwu, obi ike ngwaahịa shot na a ngụda, na-egosi na ihe dị jụụ na-aga ime. Mgbe ahụ, a na-atụba ndị na-ekiri ihe na-eme n'etiti akụkọ ahụ wee kọwaa akụkọ ahụ n'ebe ahụ.
Ọ Funụ dị ọcha
"Ihe dị ọcha" na-eme ka ndị na-ekiri ya daa n'etiti etiti ahụ na-enweghị egwu ma ọ bụ ezigbo mmetụta nke ihe na-eme. Mgbe ahụ, egwu na-abanye na mgbasa ozi na-egosi ihe dị iche iche ịgba egwu. Ọ dị ogologo karịa oge mgbasa ozi abụọ mbụ na 1 nkeji, sekọnd 33.
Tags: bbdomgbasa ozi googlegoogle +mobile video mgbasa ozimobile video mgbasa oziigirigi ugwu